Imali Yesikhwama Sokukhokhela Izindleko Zokuhamba Ngebhasikidi le-Nextbike Konya Smart futhi Ukucutshungulwa Kwamalungu | RayHaber | Isitimela | Umgwaqo omkhulu | ikhebula imoto
IkhayaTURKEYIsifunda sase-Central Anatolia42 KonyaNextbike Konya Smart Bike Izikhungo
07 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 42 Konya, Isifunda sase-Central Anatolia, JIKELELE, Highway, Izinhlelo zeThire zeTrime, TURKEY 0
elandelayobike konya iziteshi zebhayisekili ezihlelekile zamashejuli kanye nokushintshwa kwamalungu
Nextbike Konya, ngenhloso yokuqhakambisa ukusetshenziswa kwamabhayisekili njengendlela yokuhamba ngaphezu kokusetshenziselwa izinjongo zokuzijabulisa nezemidlalo; I-Nextbike Konya ihlose ukukhulisa i-Bisiklet Smart Bike Sharing System inde kulo lonke elaseKonya, ngaleyo ndlela inikeze izinto zokuhamba ezinempilo nezemvelo kubo bonke abathandi bamabhayisekili.
Ngohlelo lwe-Smart Bike Sharing System, abathandi bezithuthuthu ngeke kudingeke baphathe amabhayisekili abo, bangabaqasha ngamabhayisekili asuka eziteshini zeKonya esilandelayo futhi bawashiye kunoma yisiphi isiteshi esise-Nextbike Konya.
Ngabe isebenza kanjani?
Amabhayisikili angatholakala ezindaweni eziphakathi impela kweKonya. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuletha i-ELKART yakho eduze kwezwa futhi uthathe ibhayisekili. Ukubuyisa isithuthuthu, mane ubeke ibhayisekili endaweni etholakalayo esiteshini. Ungabhalisa lapha, noma kwesinye seziteshi zethu ngenkathi uqasha okokuqala.
Udinga ikhadi lesikweletu ukuqasha ibhayisekili! Faka inombolo yakho yocingo ephathekayo, igama nemininingwane yekhadi lesikweletu bese uqala ukuhamba ngebhayisikile! Uma une-ELKART, kufanele uyisondeze sensor ngesikhathi sokubhalisa.
Uma ubhalisile nge -bike elandelayo kusuka ku-webhusayithi ngaphambili, ulethe i-ELKART yakho eduze kwe-sensor, faka inombolo yakho yocingo kanye ne-PIN khodi. Manje udinga i-ELKART yakho kuphela ngokuqasha ibhayisekili bese ubuyela!
Hambisa i-ELKART eduze kwezwa
Ibhayisekili livula ngokuzenzakalelayo
Ungathatha isithuthuthu ngesiginali esiteshini
Uzobona ikhodi yokukhiya ibhayisekili esikrinini esibulalayo nomyalezo wolwazi (i-SMS noma ucingo olufushane) uzothunyelwa kwifoni yakho ephathekayo.
Beka ibhayisekili endaweni efanele esiteshini
Ukukhanya esiteshini kukhombisa ukuthi ibhayisekili libuyelwe ngempumelelo
Sicela ukhiye ibhayisekili lapho ubuya.
Siqopha imininingwane yakho ngaphambi kokusebenzisa uhlelo lokuqasha ibhayisekili. Uhlelo lwethu lukubona ngenombolo yakho yocingo ngokuqashiswa kamuva. Uma usubhalisiwe, ungasebenzisa uhlelo lwethu lokuqasha ibhayisekili kuwo wonke amadolobha aseduze emhlabeni jikelele. Nge-akhawunti yamakhasimende ungaqasha kuze kufike emabhayisikini angama-4.
Ungakhokha ngekhadi lesikweletu. Ukuqinisekisa imininingwane yakho yokukhokha, i-1 TL izokhokhiselwa ekhadini lakho. Leli nani lizofakwa kwi-akhawunti yakho ukuze ulisebenzise.
Nextbike Konya Fee Sheduli
Siyakwazi ukunikela ngamanani akhanga kakhulu sibonga ezinhlelweni zethu zokuqashisa ezikhona kanye nokuba khona kwabalingani bethu bokukhangisa futhi kulula.
Ungabuyisela isithuthuthu sakho ezindaweni zethu ezisemthethweni. Sicela ubheke indawo yethu ukubona izindawo zethu.
Amanye amacala enkonzo
Buyela ezindaweni ezingekho emthethweni noma ezindaweni: 4 TL km ngehora, ubuncane be-20 TL
Ukulimala noma ukwebiwa: 300 TL
Lezi zimali zizoqongelwa ukubuyiswa kwempahla. Ngiyabonga ngokuqonda kwakho.
Esimweni somonakalo noma ukweba, umuntu oqasha ibhayili uzokhokhiswa imali ye-300 TL. Uma kwenzeka ukunganaki okukhulu noma ukulimala ngamabomu, umuntu oqasha ibhayisekili unesibopho ngokugcwele ngaphansi komthetho. Ibhayisekili kungumthwalo wakho wemfanelo kusukela ngesikhathi uthola ikhodi yakho yokuqasha ibhayisekili kuze kube yilapho iqembu lethu lenkonzo libheka ibhayisekili futhi linquma ukuqasha ibhayisekili elifanayo. Amasheke anokwenzeka ngezikhathi ezingahleliwe (emahoreni we-48 ngemuva kokubuya kwebhayisekili).
Bona imigomo nemibandela ukuthola eminye imininingwane.
Kanye ngosuku i-30 yamaminithi yokuqala imahhala
I-24 ibuka i-15 TL
Amaviki we-1 (izinsuku ze-7) i-60 TL
Imephu Konya Netbike